CIN Khabar स्ववियु नेतृत्वमा टीका लगाउने कि क्षमता चिन्ने ?
पवन शाही ठकुरी आईतबार, माघ १२, २०७६, ०२:४३:००
विद्यार्थीको हकअधिकारको रक्षाका लागि र आम विद्यार्थीको माग सम्वोधनका लागि क्याम्पस प्रशासनलाई घच्घचाउने काम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को हो ।
त्यति मात्रै होइन, विद्यार्थीको विपक्षमा क्याम्पस प्रशासनले गरेका गलत निर्णयलाई सच्याउँदै, उचित निर्णयका लागि मार्ग निर्देशन गर्न दवाव दिने काम पनि विद्यार्थी सङ्गठन र स्ववियुको हो ।
क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि क्याम्पस प्रशासनसँग सहकार्य गर्ने काम पनि स्ववियुले गर्छ । विद्यार्थी र क्याम्पस प्रशासनकाबीच समुधर सम्बन्ध बनाईराख्न पनि स्ववियुको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
हरेक दुई÷दुई वर्षमा स्ववियुको चुनाव हुनुपर्ने हो । तर प्रायः क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव नभएको १० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यो बीचमा क्याम्पसमा हुने हरेक खाले गतिविधिमा विद्यार्थी सङ्गठनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर विभिन्न राजनीतिक दल निकटको ट्याग लागेका विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका काममा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि पनि स्ववियुको खाँचो छ ।
स्ववियु निर्वाचन फगत विद्यार्थीहरूको चुनाव होइन । यो त लामो समयको विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हो । राणाकालदेखि नै सङ्गठित हुने अवसर पाएका विद्यार्थीहरूले लामो सङ्घर्ष गरे । त्यसकै उपलब्धिको रूपमा स्ववियु र यसको चुनावलाई लिन सकिन्छ ।
स्वाभाविक रूपमा बलियो सङ्गठनले विद्यार्थीका माग पूरा गर्न क्याम्पस प्रशासनसँग दह्रो खुट्टा टेक्नेछ । तर त्यतिले मात्रै पुग्ने छैन । मुख्य कुरा सबै विद्यार्थीको साझा सङ्गठनको जरुरी छ । त्यो भनेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो । स्ववियु चुनाव भए, विद्यार्थीहरूले साझा सङगठन पाउनेछन् ।
दसौँ हजार विद्यार्थी भएका क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुनु र त्यसमा निर्वाचित हुनुलाई भविष्यको देशकै नेताका रूपमा हेरिन्छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण पनि नेपाली राजनीतिमा छन् । अहिलेका हरेक पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरू हिजो विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाटै आएका हुन् । यस आधारमा भन्दा पनि स्ववियु चुनाव रोकिनुले विद्यार्थी र क्याम्पसलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि बेफाइदा भइरहेको छ । देशले भविश्यका नेता पाउन सकिरहेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले २०७६ फागुन १४ गतेका लागि स्ववियु चुनावको घोषणा गरेको छ । यसले आम विद्यार्थीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । तर तोकिएकै समयमा चुनाव होला भन्नेमा, ढुक्क हुने अवस्थामा विद्यार्थी छैनन् ।
यसअघि पनि स्ववियु चुनावको मिति पटक पटक तोकिने तर चुनाव नहुने विगत तपाईहाम्रो सामु छर्लङ्गै छ । तर यसपटक सबै तहमा स्थायी सरकार बनेका कारण स्ववियु चुनावको माहोल बनेको जस्तो देखिन्छ ।
स्ववियु चुनाव किन हुनुपर्छ ? यसका प्रशस्तै कारणहरु छन् । पहिलो त, विद्यार्थीहरुको हक अधिकारको विषयमा क्याम्पस प्रशासनसँग समन्वय गर्ने काम स्ववियुकै हुन्छ । दोस्रो विद्यार्थीले राजनीतिक अभ्यास गर्न पाउँछन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउँछन् । समाज बुझ्न पाउँछन् । देश बुझ्न पाउँछन् र आफैँलाई बुझ्न पाउँछन् ।
पाटन संयुक्त क्याम्पसको कुरा गर्दा स्ववियु चुनाव नभएको १० वर्ष पुगिसकेको छ ।
बितेका दस वर्षमा बागमतिमा धेरै पानी बग्यो । पाटन संयुक्त क्याम्पस गेटबाट सयौँ विद्यार्थी भित्रिए । त्यति नै विद्यार्थी बाहिरिए । केही विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूका कतिपय पूरा गर्नै पर्ने मागहरू पूरा भएका छैनन् । विद्यार्थी सङ्गठनले जति सके त्यति गरिरहेका छन् ।
थाहा छैन, त्यो विद्यार्थीका लागि पर्याप्त छ, या छैन । दावाका साथ भन्न सकिन्छ, स्ववियु चुनाव नभएकै कारण पाटन संयुक्त क्याम्पसको वातावरण विद्यार्थीमैत्री छैन । राम्रो पुस्तकालय नभएको गुनासो विद्यार्थीहरूले गरिरहन्छन् ।
स्ववियु चुनावको मिति आगामी फागुन १४ का लागि तोकिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले समयमै चुनाव गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । आशा छ, क्याम्पस प्रशासनको पनि विद्यार्थीहरूलाई साथ रहनेछ । चुनावपछि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा आउने स्ववियुले विद्यार्थीका जायज माग पूरा गर्न दृढ संकल्पित भएर लाग्नेछ ।
पुस्तकालयको के कुरा, व्यवस्थित शौचालय पनि छैन । विद्यार्थीेले खाजा खान क्यान्टिनको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । अरु भौतिक संरचना पनि राम्रा छैनन् । कक्षा कोठाहरू प्रविधीमैत्री छैनन् । विद्यार्थीले समय समयमा गुणस्तरीय पढाइ नभएको गुनासो गरिरहन्छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरू सक्रिय छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु), नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङघ), अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगायतका विद्यार्थी सङ्गठन सक्रिय छन् । उनीहरूले धेरथोर विद्यार्थीका लागि काम पनि गरिरहेका छन् ।
अखिल र अखिल क्रान्तिकारी माउ पार्टी मिलेसँगै एकीकरण हुने पक्रियामा छन् । त्यसो हुँदा पाटन संयुक्त क्याम्पसमा पनि दुई विद्यार्थी सङ्गठनको एकता हुनेछ । एकताले सङ्गठन थप बलियो हुने विश्वास लिएको छु ।
विद्यार्थी सङ्गठनमा लामो समय काम गरेका अनुभवी व्यक्तिहरू स्ववियुको नेतृत्वका प्रमुख दावेदार हुन् । तर उनीहरूलाई चिन्ता नेताहरूको नजिकका मानिसहरूको छ । जो कहिलै कलेज नआएरै कलेजका नेता बन्छन् । टीका लगाएर नेता बनाउने परिपाटीले सङ्गठनलाई कमजोर बनाउँछ ।
विद्यार्थीको माझमा लोकप्रिय व्यक्तिलाई पार्टी र अखिल केन्द्रले चिन्न सक्दा त्यसको फाइदा पार्टी र सङ्गठनले मात्रै होइन, सारा विद्यार्थी र सिङ्गो देशले उठाउनेछ ।
क्याम्पसमा बलियो जनआधार भएको अखिल स्वाभाविक रूपमा स्ववियुको बलियो दाबेदार हो । दाबेदार सङ्गठनको नेतृत्वमा रहनेहरूको स्वाभाविक दाबी स्ववियु नेतृत्वमा पनि रहन्छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ १२, २०७६, ०२:४३:००
पवन शाही ठकुरी
शाही अनेरास्ववियु पाटन संयुक्त क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
बन्दाबन्दीमा थुनिएका विद्यार्थी र नसुनिएको व्यथा
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका, सिलुवाका ४५ बर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज जानकारी दिएको हो । १५ घण्टा